पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अचेल निद्रा लाग्दैन ! - Himali Patrika	पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई अचेल निद्रा लाग्दैन ! - Himali Patrika
देशको टाउकोमा थुप्रिएको अत्यधिक ऋण, मुद्रास्फीति र अनियन्त्रित महँगीका कारण आफूलाई अचेल निद्रा नलाग्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले बताएका छन् । एक नयाँ मिडिया रिपोर्टले पनि यो तथ्य पुष्टि गरेको छ । तथापि, महँगीबारे कोरोना महामारी बढी जिम्मेवार रहेको पनि इमरानले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
पाकिस्तानी अखबार ‘डन’का अनुसार, आकाश छुँदै गएको महँगीले आफूलाई राति निदाउन नदिएको इमरानको स्वीकारोक्ति छ । उनले मुद्रास्फीति विश्वव्यापी समस्या भएको पनि भन्न भ्याएका थिए ।
सन् २०१८ मा राजनीतिइतरका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा पाकिस्तानी जनता निकै खुसी थिए । क्रिकेटमा खुबै जमेका र देशको प्रतिनिधित्व गरेका खेलाडी इमरान जब पाकिस्तानको सत्तामा उक्लिए तब त्यहाँका जनतामा आशा पलाएको हो । तर परिस्थिति सोचेजस्तो भएन । इमरानले आफ्नो नेतृत्वको पाकिस्तान तहरिक-ए–इन्सान पार्टी सत्तामा जाँदा देशले ठूलो व्यापारघाटा बेहोरिरहेको बताएका छन् । यसले गर्दा आयात मूल्य बढ्न गएको र परिणामतः महँगी बढेको उनको भनाइ छ ।
पाकिस्तानले महामारी नियन्त्रणका लागि आठ हजार बिलियन डलर खर्च गरेको छ । तर पनि कोरोना महामारी पूर्ण नियन्त्रणमा आएको छैन । सबै नागरिकसम्म खोप पुगेको छैन । पाकिस्तानमा महँगीको मार सबैभन्दा बढी आवधिक तलबमा काम गर्ने वर्ग परेको देखिएको छ ।
पाकिस्तानको बाह्य ऋणको अंक भयावह छ । ‘टे«डिङ इकोनोमिक्स ग्लोबल माइक्रो मोडल्स एन्ड एनालिस्ट’का अनुसार २०२२ सम्ममा पाकिस्तानको बाह्य ऋण एक लाख १८ हजार पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । यो ठूलो ऋण तिर्ने उपाय पाकिस्तानले अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन ।
गत महिनामात्रै पाकिस्तानले साउदी अरबसँग एक वर्षे ऋण लियो । कतिपय विश्लेषकहरू पाकिस्तान अहिले चिनियाँ ऋणको पासोमा परिसकेको बताउँछन् । केही महिनाअघि उक्त दक्षिण एसियाली मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि ऋण लिएको थियो । उक्त ऋण निकै विवादमा परेको थियो ।
धनी तथा शुभेच्छुक मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूसँगको ऋणले सबैभन्दा बढी त्यहाँका नागरिकमाथि भार पर्न गएको छ । अहिले प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिकको टाउकोमा ११ सय एक अमेरिकी डलर ऋण रहेको छ ।
कुनै समय पाकिस्तान दक्षिण एसियाको धनी देशहरूमध्ये एक थियो । कतिपय अर्थशास्त्रीहरू २०१० देखि उक्त देश ओरालो लाग्न थालेको बताउँछन् । अहिले अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्य पनि निकै तल रहेको छ ।
अधिकारकर्मीहरू पाकिस्तानमा सबैभन्दा कमजोर मानवअधिकार रहेको बताउँछन् । सोही कारण पाकिस्तानी नागरिकको व्यक्तिगत उन्नति हुन नसकेको उनीहरूको धारणा छ । त्यहाँ उत्पादकत्व पनि निकै खस्केको छ । पाकिस्तानमा पछिल्लो समय सडकमा बसेर माग्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ ।
कलाकार, खेलाडी तथा राजनीतिकर्मी इमरानलाई निद्रा नलाग्नु स्वाभाविक छ । उनले जेजस्तो सपना बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए, त्यो साकार हुन सकिरहेको छैन । भन्न सकिँदैन, त्यो सार्क देशले कहिले आफ्नो मुहार फेर्ला र प्रधानमन्त्री इमरानले कुन दिनदेखि मज्जाले निदाउन सक्लान् !